Google ကမင်းရဲ့နောက်ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် Androidsis
ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်အမေဇုံသည်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုစူးစမ်းရန်နီးစပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ၏ဥက္ကFrancisco္ဌ Francisco Gonzálezကယင်းကိုမကြာသေးမီကမက်ဒရစ်တွင်ကျင်းပသောကွန်ဂရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီကြီးများသည်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဘဏ်၏ပြိုင်ဘက်များမဖြစ်လာမီအချိန်သည်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့အရွယ်အစားကဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားတာကမဆင်ခြင်နိုင်ဘူး။ ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏အရွယ်အစားသည်တူညီသောအခါအခြားစီးပွားရေးနယ်ပယ်များကိုလေ့လာရန်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Google သည်ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောဘဏ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်လော။
အချို့သောအခါများ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းသင့်အားသင်ပြောခဲ့သည် ဂူဂဲလ် (သို့) အက်ပဲလ်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တက္ကသိုလ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ အသိတွေအများကြီးနဲ့တစ်ခုခု။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်သမားများကိုအစမှစပြီးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏အနာဂတ် ၀ န်ထမ်းများ၏အရည်အချင်းကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ် "ပုံသွင်း" ပါ။
သို့သော်နည်းပညာနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းအကြောင်းပြောခြင်းသည်နည်းပညာနှင့်ပညာရေးအကြောင်းပြောခြင်းနှင့်မတူပါ။ ဒါကြောင့်တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်ပေမယ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းများက၎င်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများကိုကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့မြို့မှာအနည်းဆုံးအချိန်တိုအတွင်းမှာ Google Bank ရဲ့ဌာနခွဲတစ်ခုကိုငါတို့မမြင်နိုင်ဘူးလား။
ဘဏ်များသည်နည်းပညာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ စမတ်ဖုန်းများအတွက်အသုံးပြုသော application များနှင့်အသုံးပြုသူများ၏အချက်အလက်များကိုကုသမှု။ အရာအားလုံးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဆက်သွယ်မှုတက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုပုံရသည်။ ဥပမာအမေဇုံကိုကမ္ဘာတစ်လွှားရှိကုမ္ပဏီများသည်ထိရောက်သောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အနီးကပ်လိုက်ကြသည်။
ဂူဂဲလ်နှင့်သင်၏အိမ်အတွက်အပေါင်ခံချေးငွေတစ်ခုကိုသင်လက်မှတ်ထိုးရန်သင်စိတ်ကူးနိုင်ပါသလား။ ဘဏ္investmentာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ဆုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ရှာဖွေမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ရနိုင်မလား။ ဘဏ်လုပ်ငန်း ခုခံကာကွယ်ပါ၊ ကြီးမားတဲ့နည်းပညာနဲ့မတူတာက သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လုံခြုံရေးပိုမိုကြီးမားသောအာမခံချက်များပေးနိုင်သည်။ ပြီးတော့အားလုံးအထက် ရှုပ်ထွေးသောဘဏ္financialာရေးစည်းမျဉ်းများအတွေ့အကြုံ.
ဆိုးကျိုးများအားဖြင့်, ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်အမေဇုံသည်အားနည်းနေနိုင်ပြီးဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက် ပို၍ ပြင်ဆင်မှုရှိနိုင်သည် တစ် ဦး တိုက်ခိုက်မှုမပြုမီ။ ယခုအချိန်အထိနည်းပညာဝါသနာပါသောကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ခုမရောနှောခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထက်သာတယ် ဂူးဂဲလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေပေးဖို့အာရုံစိုက်တယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစမတ်ဖုန်းများနှင့်သူတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်များတွင်တိုးတက်မှုများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဂူဂဲလ်ကသင်၏နောက်ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်
Nokia 7: Nokia ရဲ့ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်